Uyifaka njani ifonti yokubhaliweyo kwiMac yakho | Iindaba zeGajethi
Uzifaka njani iifonti yokubhaliweyo kwiMac yakho
Nokuba ungumsebenzisi weWindows okanye weMac, kwaye sele usebenzisa ikhompyuter yakho ngeenjongo zobungcali okanye zolonwabo, uya kwazi kakuhle ukuba zininzi kakhulu fonts efakwe kwangaphambili kwinkqubo ukusebenza. Ngokuqinisekileyo kuye kwenzeka kuwe ukuba ubhale naluphi na uxwebhu kwaye uthandabuze ukuba loluphi uhlobo lwefonti olusemthethweni, okanye ukhe wawela ingqondo yakho ukutshintsha ifonti yenkqubo yokusebenza ngokupheleleyo, kwaye awazi ukuba loluphi olukhethiweyo.
Ewe, siza kwenza kube nzima kuwe, kuba siza kuchaza ufaka njani iifonti ezintsha kwi-Mac yakho. Ayisiyonkqubo inzima, inde okanye iyadinisa, cwaka, kuba xa ugqibile ukufunda esi sifundo uya kuba nakho ukukhetha phakathi kwamakhulu nekhulu leefonti oza kuzisebenzisa kwityeli ngalinye. Ngaba ungahamba nathi?
1 Khuphela iifonti kwi-Mac yakho
2 Faka ifonti kwi-Mac yakho
Khuphela iifonti kwi-Mac yakho
Kwimeko yokuqala, yikhankanye loo nto Inkqubo isebenza ngokufanayo ngaphandle kwenguqulelo yeMacOS oyisebenzisayo. Into yokuqala ekufuneka siyikhumbule, ewe, siyazi ukuba loluphi uhlobo lwefonti esifuna ukuyifaka kwinkqubo yethu. Kucacile ukuba, kuninzi lweziganeko, kuya kuba nzima ukuba sazi ukuba loluphi uhlobo lwefonti esifuna ukuyibiza, kwaye, ngenxa yobuninzi beefonti ezikhoyo, kuya kuba nzima kakhulu kuthi sazi kakuhle ukuba yeyiphi na ebesiyifuna.
Ke ukongeza ekukhetheni umthombo, kuya kufuneka sazi ukuba siwukhangela phi. Elinye lawona maphepha ewebhu abanzi ngokwefonti yile Dafont, phi sinokufumana ngaphezulu kweefonti ezahlukeneyo ezingama-30.000. Singachitha iiyure kunye neeyure sikhangela kwaye sikhangele ubude nobubanzi be-intanethi, ukuba ileta le siyifunayo, ngokuqinisekileyo siyakuyifumana kule webhusayithi.
Nje ukuba singene kwiwebhu, kwaye sinokubakho okukhulu hluza imithombo ekhoyo ngezihloko, ababhali, iindaba, okanye ezona zikala zibalaseleyo ngabasebenzisi. Okanye sinako sebenzisa injini yokukhangela, ebekwe kwikona ephezulu ngasekunene, ukuba siyalazi igama lomthombo ekubhekiswa kuwo. Emva kokufumana umthombo esiwufunayo, siza kucofa igama lakho kwaye siyabona imbonakalo efanayo ngaphambi kokuqhubeka nokukhuphela. Oku kuluncedo kakhulu, kuba siya kuba nakho ukubona umlinganiswa ngamnye ngaphambi kokukhuphela ifonti epheleleyo.
Nje ukuba oonobumba babonakalisiwe, oonobumba abakhulu kunye nabancinci kunye neenombolo, kwaye bacace malunga nefonti esifuna ukuyifumana, siza kucofa kwiqhosha lokukhuphelar, ebekwe ngasekunene kwephepha. Siza kukhuphela ifayile ye- Uxinzelelo lwefayile kwifom .zip apho sinokufumana khona ifonti epheleleyo, ehlala ihlala ngaphantsi kwe-1Mb, ukongeza kwifayile yokubhaliweyo enelayisensi yefonti, ukuba unayo. Nje ukuba ukhutshelwe, masibone ukuba siyifaka njani.
Faka ifonti kwi-Mac yakho
Ngomgca osele ukhutshelwe kwikhompyuter yethu, inyathelo lokuqala oza kulithatha liya kuba khuphela ifayile ekhutshelwe kwenye ifolda apho sisondele khona kwaye, sakuba silapho, izip ngokucofa kabini kuyo. Ngeli xesha siza kufumana, ukongeza kwifayile ye- .ff ifayile, ehambelana nomthombo opheleleyo wombhalo, a Ifayile yokubhaliweyo ngolwazi malunga nayo, njengemiyalelo yokufaka okanye isivumelwano selayisensi.
Ngefayile engavulelwanga, inyathelo kuphela eliseleyo kuku cofa kabini kwi icon yefayile yefonti uqobo (ngolwandiso lwe .otf), kwaye ke iwindow iya kuvula apho sinokujonga khona umthombo osisiseko kwikhompyuter yethu. Ukuba siyikhuphele ifonti ngokuchanekileyo kwaye iziphumo kwiscreen yile nto siyilindeleyo, konke okushiyekileyo kunjalo Cinezela iqhosha «Faka ifonti» ebekwe kwikona esezantsi ngasefestileni.
Nje ukuba ifakwe, iya kuvulwa kwenye iwindow Ikhathalogu yohlobo lweMac ngokuzenzekelayo. Ayisiyonto ngaphandle kweseti ye fonts efakwe kwi-Mac yethu, apho sinokubona khona yonke imigca, zombini ezo zinto zidityaniswa yile nkqubo kunye nezo zifakwe ngumsebenzisi. Ukusuka apha singabalawula, sikhethe ukuba yeyiphi esifuna ukuyigcina kwaye yeyiphi esifuna ukuyiphelisa, ukuba sifuna ukulahla nayiphi na. Sinokubakhubaza ngendlela esithanda ngayo, sishiya ifonti ifakiwe kodwa ingafikeleleki kuyo nayiphi na inkqubo.
Njengoko sele ubonile, yi inkqubo elula, elula nekhawulezayo, esinokuthi ngokulula silungiselele onke amaxwebhu esiwenzayo okanye esiwatshintsha kwi-Mac yethu, sibanike ubuchule bethu. Gcina ukhumbula ukuba, ukuba sabelana ngoxwebhu kunye nefonti elandwe sithi, umamkeli kuya kufuneka afake ifonti efanayo kwikhompyuter yakhe ukuze sikwazi ukubona nokuguqula naliphi na icandelo lesicatshulwa, ke kufuneka sikwazise ukuba yeyiphi ifonti esiyisebenzisileyo. Ulinde ntoni ukufumana iifonti zakho ezifanelekileyo kuzo zonke izihlandlo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Uzifaka njani iifonti yokubhaliweyo kwiMac yakho
Uyithumela njani indawo ngo-WhatsApp